निर्मला हत्या प्रकरणः अहिले के हुँदैछ अनुसन्धान ? – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
आजका पत्रपत्रिका विषेश समाचार
काठमाडौँ, २५ भदौ, कन्चनपुरकी निर्मला पन्त हत्या प्रकरणको जालो समाधान तिर भन्दा झन् झन् जेलिँदै गएको छ । प्रहरीले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ भने छानविन आयोगले पनि आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदनले प्रहरी छानविनमा व्यापक त्रुटी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
यसैबीच आइतबार मात्रै प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल कञ्चनपुर पुगेर हत्याराले उन्मुक्ति नपाउने उद्घोष गरेका छन् । तर पनि अपराधी पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । यो जालो कहिले फुक्ला त्यो पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
अहिले अनुसन्धान कहाँ पुग्यो त ?
प्रहरीले दिलीपका साथै निर्मला हराएको घरका दिदीबहिनी बबिता र रोशनी बमलाई पनि पक्राउ गरेको छ । जिल्ला न्यायाधिवक्ता खेमराज भट्टका अनुसार प्रहरीले दिलीपलाई बढीमा २८ भदौसम्म मात्र हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । त्यसपछि प्रहरीसँग तीन विकल्प रहने उनको धारणा छ । उनका अनुसार पहिलो, प्रमाण पुर्याएर मुद्दा अभियोजन गर्ने, दोस्रो, सरकारी वकिलको कार्यालयको सहमतिमा पछि फेरि अनुसन्धानका लागि झिकाउने गरी धरौटी लिएर तारिखमा छोड्ने र तेस्रो, प्रमाण जुटाउन नसके रिहा गर्ने ।
दिलीपलाई दोषि प्रमाणित गर्न प्रहरीसँग अन्य ठोस आधार नभएपछि प्रहरीको आशा डिएनए परीक्षण प्रतिवेदनमै टिकेको छ आजको नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ ।
निर्मलाको शव परीक्षणको लागि १३ साउनमा नै प्रहरीले केन्द्रीय विधिविज्ञान प्रयोगशाला पठाइसकेको छ भने ५ भदौमा दिलीपको रगत पनि डिएनए परीक्षणका लागि पठाएको छ ।
ती रिपोर्ट दुई, तीन दिन भित्र आइपुग्ने भएकोले त्यसपछि मात्रै केही भन्न सकिने एसपी कडायत बताउँछन् ।
यसैगरी सिआइबीको नयाँ टोलीले पनि फरक ढंगले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । घटनास्थल नजिकै एक एक ठेकेदारको घर छ । जहाा दिनहुँ ६–७ वटा टिपर, त्यसका चालक, सहचालक र मजदुर रहन्छन् । सिआइबीले उनीहरुसँग पनि सोधपुछ गर्ने र विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्ने काम गरिरहेको छ ।
त्यसबाहेक घटनास्थल नजिकै सेनाको श्री २५ नम्बर बाहिनी गण पनि छ । सीआइबीले त्यसतर्फ पनि आफ्नो अनुसन्धानको धार फर्काएको छ । तर पनि ठोस प्रमाण प्राप्त नहुनजेलसम्म अनुसन्धान निष्कृय प्रायः देखिएको छ ।
Tagged अनुसन्धान अपराध निर्मला पन्त हत्या
Tags: अनुसन्धान, अपराध, निर्मला पन्त, हत्या